လေယာဉ် မယ် ရဲ့ စကားကိုနား မထောင် ခဲ့လို့ ဘဝပျက် ပြီး ဆေးရုံ ရောက် သွားတဲ့ အမျိုး သားတစ်ယောက် အကြောင်း – Zartiman
လေယာဉ် မယ် ရဲ့ စကားကိုနား မထောင် ခဲ့လို့ ဘဝပျက် ပြီး ဆေးရုံ ရောက် သွားတဲ့ အမျိုး သားတစ်ယောက် အကြောင်း
Zar Ti Man | August 17, 2020 | Knowledge | No Comments
နောက်ဆုံးတခု ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီး နှိပ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ….အားးးးးး ကျွန်တော့ ရဲ့ အောက်ပိုင်းနားမှာ စူးကနဲ ဖြစ် သွားတာကို ခံစားလိုက်ရပြီး သတိလစ်သွားပါရောဗျာ။ သတိရလာတဲ့ အခါမှာတော့ ဆေးရုံကို ရောက်နေတာဗျားးဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း အနားမှာရှိတဲ့ နပ်စ်မကို “ဒီမှာ …ဆရာမလေး” “ကျွန်တော်ဆေးရုံကို ဘယ်လိုရောက်လာ တာလဲ ခင်ဗျာ?“နပ်စ်မက .. ဒီလိုပါ လူကြီးမင်း ရှင့် ” လူကြီးမင်းက ATR ကို နိပ်လိုက်လို့ပါ။ အဲ့ဒါက Automatic Tampon Removal ပါ။ အဲ့ဒီစနစ် အလုပ်လုပ်တာက အမျိုးသမီး လ စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကို အော်တိုမက်တစ် ရှင်းပေးတာပါ။
လူကြီးမင်းက အဲဒီအခံမရှိတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ ဥ (၂) လုံးကို ဆွဲဖြုတ်သွားလို့ အခုလို မေ့ပြီး ဆေးရုံ ကို ရောက်လာတာပါရှင့် ..”အဖြစ်က ဒီလိုဗျ …ကျနော် အော်ဇီ ကို လေယာဉ်နဲ့သွားတုန်းက အိမ်သာတက် ချင်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ ယောက်ျားလေး အိမ်သာက လူပြည့်နေ တာဗျ . .။ကျနော် မျက်နှာပျက် နေတာကို လေယာဉ်မယ် လေးက တွေ့တော့သနားပြီး အမျိုးသမီး အိမ်သာကို အသုံးပြုခွင့် ပေးတယ်ဗျာ ။ “လူကြီးမင်း အနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ရှင့် တခုတော့ သတိပေးပါရစေ ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင် ရေလောင်းပြီးသာ ထွက်လာလိုက်ပါ တခြားခ လုတ်တွေကို ယောင်လို့ မနှိပ်မိပါစေနဲ့ရှင်”။ကျနော်လဲ စိတ်ထဲက တွေးမိလိုက်တယ် ငါ့များရေမလောင်းပဲ သွားမယ့်သူကျနေတာပဲ။
ဟွန့် အမျိုးသမီး အိမ်သာက ဘာတွေကွာခြားလို့လဲ တွေးပြီး ဘေးဘီဝဲယာကို ကြည့်လိုက် တော့ ခလုတ် (၄) ခု တွေ့လိုက်တယ်ဗျာ။WW-WA-PP-ATR ဒီခလုတ် (၄) ခုက ဘာများလုပ်ဆောင်ပါလိမ့် ဆိုပြီး စဉ်းစားနေတာပေါ့။အိမ်သာ တက်ပြီးတော့ ကျနော်အဲ့ဒီ ခလုတ် ၄ ခုရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ကို စမ်းကြည့်အုံးမှဘာဆိုပြီး အရင်ဆုံး WWဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဖင်ကိုရေပူ တွေနဲ့ ဆေးပေးနေတယ်ခမျ…. အိုးးးး အော်အဓိပ္ပါယ်က warm water ပေါ့ great idea … ။ အဲ….ပြီးတော့ WA ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တော့ လေပူတွေ ထွက်လာ တယ်ဗျာ….wow …လန်းထှာ WA ဆိုတော့ warm air ပေါ့ လေပူလေးနဲ့ မှုတ်ပေးတာ ဇိမ်ခံကောင်းသဗျာ။
ဒါကြောင့် မိန်းခေးတွေ အိမ်သာတက်ရင် ကြာတာကိုးးး။ ထပ်ပြီး တော့ PP ဆိုတဲ့ ခလုတ် ကို နှိပ်လိုက်တော့ တို့ပတ်( powder puff) တခုထွက်လာပြီး စောစောက အပူပေး အခြောက်ခံထားတဲ့ တင်သားတဝိုက်ကို ပေါင်ဒါနဲ့ တို့ပတ်ရိုက် ပေးပါလေရောဗျာ။ကျနော် အံ့သြ သွားတယ်ဗျာ… အိုက်စ် ငါတို့မိဘတွေက မျက်နာတို့ လည်ပင်းတို့မှာဘဲ တို့ပေးတာ …ဒီမှာက မိန်းခေးတွေအတွက်…။“ဂိန်“
နောကျဆုံးတခု ကို အရမျးစိတျဝငျစားသှားပွီး နှိပျခလြိုကျတဲ့အခြိနျမှာ….အားးးးးး ကြှနျတော့ ရဲ့ အောကျပိုငျးနားမှာ စူးကနဲ ဖွဈ သှားတာကို ခံစားလိုကျရပွီး သတိလဈသှားပါရောဗြာ။ သတိရလာတဲ့ အခါမှာတော့ ဆေးရုံကို ရောကျနတောဗြားးဒါနဲ့ကြှနျတျောလညျး အနားမှာရှိတဲ့ နပျဈမကို “ဒီမှာ …ဆရာမလေး” “ကြှနျတျောဆေးရုံကို ဘယျလိုရောကျလာ တာလဲ ခငျဗြာ?“နပျဈမက .. ဒီလိုပါ လူကွီးမငျး ရှငျ့ ” လူကွီးမငျးက ATR ကို နိပျလိုကျလို့ပါ။ အဲ့ဒါက Automatic Tampon Removal ပါ။ အဲ့ဒီစနဈ အလုပျလုပျတာက အမြိုးသမီး လ စဉျသုံးပစ်စညျးတှကေို အျောတိုမကျတဈ ရှငျးပေးတာပါ။
လူကွီးမငျးက အဲဒီအခံမရှိတော့ လူကွီးမငျးရဲ့ ဥ (၂) လုံးကို ဆှဲဖွုတျသှားလို့ အခုလို မပွေီ့း ဆေးရုံ ကို ရောကျလာတာပါရှငျ့ ..”အဖွဈက ဒီလိုဗြ …ကနြျော အျောဇီ ကို လယောဉျနဲ့သှားတုနျးက အိမျသာတကျ ခငျြလို့ ကွညျ့လိုကျတော့ ယောကျြားလေး အိမျသာက လူပွညျ့နေ တာဗြ . .။ကနြျော မကျြနှာပကျြ နတောကို လယောဉျမယျ လေးက တှတေ့ော့သနားပွီး အမြိုးသမီး အိမျသာကို အသုံးပွုခှငျ့ ပေးတယျဗြာ ။ “လူကွီးမငျး အနဖွေငျ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ ရှငျ့ တခုတော့ သတိပေးပါရစေ ကိစ်စပွီးလို့ရှိရငျ ရလေောငျးပွီးသာ ထှကျလာလိုကျပါ တခွားခ လုတျတှကေို ယောငျလို့ မနှိပျမိပါစနေဲ့ရှငျ”။ကနြျောလဲ စိတျထဲက တှေးမိလိုကျတယျ ငါ့မြားရမေလောငျးပဲ သှားမယျ့သူကနြတောပဲ။
ဟှနျ့ အမြိုးသမီး အိမျသာက ဘာတှကှောခွားလို့လဲ တှေးပွီး ဘေးဘီဝဲယာကို ကွညျ့လိုကျ တော့ ခလုတျ (၄) ခု တှလေို့ကျတယျဗြာ။WW-WA-PP-ATR ဒီခလုတျ (၄) ခုက ဘာမြားလုပျဆောငျပါလိမျ့ ဆိုပွီး စဉျးစားနတောပေါ့။အိမျသာ တကျပွီးတော့ ကနြျောအဲ့ဒီ ခလုတျ ၄ ခုရဲ့ အသုံးဝငျပုံ ကို စမျးကွညျ့အုံးမှဘာဆိုပွီး အရငျဆုံး WWဆိုတဲ့ ခလုတျကို နှိပျကွညျ့လိုကျတော့ ဖငျကိုရပေူ တှနေဲ့ ဆေးပေးနတေယျခမြ…. အိုးးးး အျောအဓိပ်ပါယျက warm water ပေါ့ great idea … ။ အဲ….ပွီးတော့ WA ဆိုတဲ့ ခလုတျကို နှိပျလိုကျတော့ လပေူတှေ ထှကျလာ တယျဗြာ….wow …လနျးထှာ WA ဆိုတော့ warm air ပေါ့ လပေူလေးနဲ့ မှုတျပေးတာ ဇိမျခံကောငျးသဗြာ။
ဒါကွောငျ့ မိနျးခေးတှေ အိမျသာတကျရငျ ကွာတာကိုးးး။ ထပျပွီး တော့ PP ဆိုတဲ့ ခလုတျ ကို နှိပျလိုကျတော့ တို့ပတျ( powder puff) တခုထှကျလာပွီး စောစောက အပူပေး အခွောကျခံထားတဲ့ တငျသားတဝိုကျကို ပေါငျဒါနဲ့ တို့ပတျရိုကျ ပေးပါလရေောဗြာ။ကနြျော အံ့သွ သှားတယျဗြာ… အိုကျဈ ငါတို့မိဘတှကေ မကျြနာတို့ လညျပငျးတို့မှာဘဲ တို့ပေးတာ …ဒီမှာက မိနျးခေးတှအေတှကျ…။“ဂိနျ“
တစ်လ နှစ်လ နဲ့ လုံးဝ မပျောက်တဲ့ ကိုဗစ် နဲ့ ကာကွယ်ဆေး ကို နောက်ဆုံးမှ ရမယ့် နိုင်ငံတွေ အကြောင်း
လူတဈယောကျ၏ နာမညျကို သိရှိရုံမြှ နှငျ့ တှကျခကျြနိုငျသော အနောကျတိုငျးဂဏနျး ဗဒေငျနညျး